Isahluko se-3011 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online | XperimentalHamid
Isahluko se-3011 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Ngamana 11, 2021 Ngamana 10, 2021 by Qasim Khan
funda Isahluko 3011 yenoveli Unyana omangalisayo eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Ngokwento awayeyazi ngoZhiyu, waziva ukuba akasasifuni nesiqithi sakhe.
Okokuqala, uZhiyu kufuneka ngoku anikele yonke ingqalelo yakhe kwishishini lokuhamba elwandle.
Ngokuqinisekileyo akanamdla wokuzivumela ukuba aye eMaldives.
Okwesibini, umama wakhe ngoku angamthiya ngoko angaya njani kwisiqithi sakhe ukuze aphumle eholideyini. Ngokuqinisekileyo uLiona akayikuvuma.
UZhiyu wafinga iintshiya akuva lento ayithethayo.
Uyazi ukuba ubuncinci amanqaku alithoba ohanahaniso kwinto ethethwe nguMakhulu.
Kodwa wenzeni ngeziqithi zaseMaldives, akanamdla kwaphela!
UZhiyu wayesele eza kwala, xa wabona uMarven eqwayiza, wamsayina ukuba avume.
Ke, wathandabuza umzuzwana, wathi, “Enkosi, tamkhulu. Ndizakukhathaza utat'omkhulu ukuvumela uMnu.
Emva kokuba amalungelo obunini abhalwe igama lam, ndizakuthatha ixesha ndithathe umama ndiphumle. ”
Wathi uChengfeng akuva le nto, weva iintlungu ngamandla.
Wacinga ngokufihlakeleyo: “Ndichubekile, kutheni uvumile nje? Umncinci, ufuna ntoni ukuba sisiqithi somhlala-phantsi? Kufuneka uyiyekele kum, ndiza kwenza ntoni kwixesha elizayo? Andinakuze ndiyiphuhlise kwasekuqaleni? ”
Ecinga ngale nto, ungxamile wathi: “Zhiyu, amaxwebhu amalungelo eprophathi yesi siqithi kufuneka athunyelwe eMaldives. Kuyasokolisa, kodwa wena nonyoko ningaya apho niphumle kuqala. ”
UZhiyu uthethe kamnandi wathi: “Unyanisile, xa ndisiya apho, amalungelo obunini bepropathi aya kugqitywa.”
Emva koko, wongeze wathi: “Tamkhulu, uyazi nawe ukuba umama kufuneka abe nezimvo ezithile ngawe.
Ukuba esi siqithi sisegameni lakho, ngekhe ahambe, kodwa ukuba kusegama lam. Yahlukile. ”
UChengfeng wayenokuthi kuphela ngomsindo: “Unyanisile, utatomkhulu unetyala kuwe. Kule meko, ukuba unalo ixesha lokuya, ndiza kucela u-Anson ukuba aye apho naye ayokugqibezela okusesikweni… ”
Emva koko, ungxamile wathi kwakhona: "Hi ndlela leyi, Zhiyu, utat'omkhulu kufuneka akucele ithuba ngeli xesha…"
UZhiyu wafutha: "Uyatsho."
Ngokukhawuleza uChengfeng uthe: “Unyanisile, ububele bakho, unditsalele umnxeba ngoku. Kusenokwenzeka ukuba akazange andiqonde.
Ebebonakala ukuba akonwabanga yile ayithethileyo emnxebeni, bendizocela undincede senze uxolo naye.
Kwixesha elizayo, wonke umntu uya kuwagcina amanzi omthombo emanzini omlambo, ucinga ukuba angenzeka kuwe? ”
Isahluko se-3010 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2778 - 2779
Iingcinga ezi-5 kwi "Isahluko 3011 soNyana oMangalisayo eMthethweni kwiNoveli yasimahla kwi-Intanethi"
Meyi 11, 2021 kwi-6: 48 AM
Meyi 11, 2021 kwi-4: 37 AM
Meyi 10, 2021 kwi-10: 26 PM
Vamos más capítulos porfa
Meyi 10, 2021 kwi-9: 09 PM
ICapitulo siguiente porfa
Meyi 10, 2021 kwi-8: 07 PM
Enkosi Mnu admin ngesahluko esongezelelekileyo ngeli xesha